Ganji, Revolisiona & Sariitatra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Aogositra 2017 1:07 GMT
(Marihina fa tamin'ny 15 Febroary 2006 no nanoratana ny lahatsoratra teny anglisy)
“Dimy volana natoka-monina. Ny teknolojia nokleary ao Iran no fandrahonana lehibe kokoa ho an'izao tontolo izao . Ny fampijaliana ireo gadra politika ao. Miantso ireo governemanta vahiny mba hanangana politika miankina amin'ny fanajana ny zon'olombelona.”
Nanoratra momba ny tsingerintaonan'ny Revolisiona Islamika i Abtahi, filoha lefitra sady bilaogera teo aloha. Niezaka namaritra ny tena dikan'ny fahaleovantena ao ambadiky ny teny filamatra ilay bilaogera ary nanakiana ankolaka ny governemanta amin'izao fotoana izao .
” Ny fahafantarana ny toe-javatra misy ankehitriny sy ny handahatra izany araka izay iriany sy ilainy no ilain'ny taranaka ankehitriny teraka taorian'ny revolisiona ny ankamaroany ho takariny. Tsy voavalin'ny teny filamatra io faniriana io. Ato anatin'ity tontolo feno fifandraisana ity, mila fitantanana lojika ny fiarahamonina ao Iran hisorohana ny fifandonana mahaketraka ary tokony hamaritra ny tena fitsinjaran'ny fahefana Iraniana avy amin'ny fahefan'izao tontolo izao hahazoany ny zony. Ny fahefana manome sy mandray no tena midika fahaleovantena amin'izao tontolo izao ankehitriny. Ireo izay mamaritra ny fahaleovantena ho fitokana-monina sy ho fifandonana amin'izao tontolo izao dia mampidi-doza ny fotokevitry ny fahaleovantenan'ny firenena mihoatra noho ny hafa ary noho izany dia ataon'izy ireo miankin-doha amin'ny fahefana vahiny ny firenena. “
Mizara amintsika ny fomba fijery vaovao momba ny sariitatra sy ny fihetsiky ny vahoaka Iraniana i View from Iran, bilaogera monina any Iran:
” Miresaka momba ny firaondraon'ny sariitatra izahay, na dia mety tsy ho eritreretinareo aza, dia tsy fitabatabana loatra ao Iran. Tsy hoe tsy Miozolomana tsy manoa ny fivavahany akory ny Iraniana, fa leon'ny fanodikodinana ny Islamo misy ambadika politika ry zareo. “